ချစ်ကြည်အေး: ပျံလွန်တော်မူသွားသော ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးအကြောင်း
ဂူမျက်နှာပြင်တွင် တွေ့လိုက်ရသော စာကြောင်းလေးများက ကြောက်လန့်စိတ်နေရာကို အစားထိုးဝင် သွားလေလားမသိ။ ပြီးတော့ အုတ်ဂူဖြူဖြူပေါ်တွင် “ဘ၀ဆက်တိုင်း သံသယဖြင့် နှိပ်စက်ခံရသူအဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ရပါလို၏” ဟူသော စာသားလေးကိုလည်း တွေ့လိုက်ရပါ သည်။ သူသည် ကြောက်လန့်စိတ်ထက် စိတ်ဝင် စားသည့်စိတ်က ပိုများသွားသည်။
သူသည် သည်မြို့ကလေးသို့ ညတရားဟောဖို့ နေ့လည်(၃)နာရီခွဲလောက်ကမှ ရောက်လာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ သည်မြို့ ကလေးသည် သူ့ အတွက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။။
တရားပွဲက ည(၇)နာရီမှ စမှဆိုတော့ အချိန်ရသေးသည်နှင့် ကျောင်းအောက်သို့ဆင်းခဲ့သည်။ လမ်းလျှောက်ရင်းဖြင့် သည်နေရာ ကလေးသို့ သူရောက်လာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အသက်၂၄နှစ်ဆိုတာ လောကမှာနေလို့ အကောင်းဆုံးအရွယ်လေး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်။ ပြီးတော့ စာရေးတဲ့ ဦးဇင်းလေးတဲ့။ ပြီးတော့ စာရေးသည်ဆိုတော့ သူ့အတွက်ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်သွားသည်။
သူ့အသက်နှင့်တွက်လျှင် ဆယ်စုနှစ်တစ်စုငယ်သော ဦးဇင်းလေး။ စာပေလောကအတွက် ကလောင်တစ်ချောင်း ဆုံးရှုံးသွားသလို သာသနာအတွက်လည်း ရဟန်းတစ်ပါး ဆုံးရှုံး သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
သူသည် ညနေခင်းများစွာကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးပါသည်။ အပြုံးနှင့်လည်း ဖြတ်သန်း ဖူးသည်။ အမုန်းနှင့်လည်း ဖြတ်သန်း ဖူးသည်။ အလွမ်းနှင့်လည်း ဖြတ်သန်းဖူးသည်။ အမောနှင့်လည်း ဖြတ်သန်းဖူးသည်။၊ အပျော် နှင့်လည်း ဖြတ်သန်းဖူးသည်။ ကြောက်လန့်စိတ်နှင့်လည်း ဖြတ်သန်းဖူးသည်။ သည်ညနေခင်းလေးကတော့ ကြောက်စိတ်နှင့် ဖြတ်သန်းနေတာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါသည်။
သူသည် ပင့်သက်ကိုရှိုက်ရင်း အုတ်ဂူနားဆီသို့ တိုးသွားမိသည်။ အုတ်ဂူလေးကို လက်နှင့် ထိလိုက်တော့ ကြမ်းရှရှ အင်္ဂတေသား သည် သူ၏နှလုံးသားကို လာ၍ထိသယောင်၊ ထိလက်စ လက်ကို ချက်ချင်းမရုတ်မိ။
သူတွေးနေဆဲမှာပင် သူ့နောက်မှ ခြေသံသဲ့သဲ့ ကြားရသည်။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သည်ကျောင်းတိုက်၏ ကျောင်းထိုင်ဆရာ တော်၊ သက်တော်(၈၀)ခန့်ရှိပြီ ဖြစ်သော ဆရာတော်သည် တောင်ဝှေးကို အားပြုထားသည်။ မျက်မှန်ထူထူ၊ သင်္ကန်းအညိုရောင် ရင့်ရင့်နှင့် ဇရာ၏လက္ခဏာကို ပြနေသော်လည်း ဆရာတော်တစ်ပါးအဖြစ် ပို၍သပ္ပာယ်ဖြစ်နေပါသည်။
‘ဒီအကြောင်းတွေကို တပည့်တောာ် ဘယ်သူ့မှလည်း ပြောပြ မနေချင်တော့ပါဘူး။ ပြောမပြမိအောင်လည်း သတိထားပါတယ်။ ဦးဇင်းလေးကတော့ စားလည်းရေး တရားလည်းဟောတော့ အများနဲ့ဆက်ဆံနေရတာဆိုတော့ နည်းနည်းလောက်တော့ ပြောပြ ချင်တယ်။ ပြီးတော့သူက ဦးဇင်းလေးလိုပဲ စာရေးတယ်၊ စာရေးဆရာသိပ်ဖြစ်ချင်တာ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဆယ့်လေးငါးပုဒ်တော့ ပါဖူးတယ်’
‘ဒီဦးဇင်းလေးက ဒီမြို့ကပဲ၊ မိဘတွေကလည်း အတော်အသင့်ချမ်းသာကြပါတယ်။ တပည့်တော်ပဲ အခြေခံစာတွေသင်ပေး၊ တပည့်တော်ပဲ မန္တလေးကစာသင်တိုက်ကို ကိုယ်တိုင်ပို့ပေးခဲ့ရတာ၊ ဟိုတစ်နှစ်ကပဲ ဓမ္မာစရိယတန်းမှာ သီလက္ခန်တစ်ကျမ်း အောင်လို့ဆိုပြီး သင်္ကန်းတစ်စုံ ဆုချလိုက်ရသေးတယ်။
လိုရင်းပြောရရင်တော့ ဦးဇင်းလေးရယ်၊ သူနေတဲ့စာသင်တိုက်မှာ ဦးဇင်းတစ်ပါးက သရီးရိုင်ဖယ် ဆိုတဲ့ သင်္ကန်းတစ်စုံပျောက်တယ် တဲ့၊ ပျောက်တဲ့ဦးဇင်းက တပည့်တော်ရဲ့တပည့် ဦးဇင်းလေးကို စွပ်စွဲတယ်ပေါ့လေ။ နောက်ဆုံး ဘယ်အထိဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ ကျန်တဲ့ဦးဇင်းတွေကပါ ယုံလာပြီး စကားတွေဘာတွေ မပြောကြတော့ဘူးတဲ့၊ ပိုဆိုးတာကတော့ ဆွမ်းအတူမစားကြတော့တာပဲ၊ သူများပစ္စည်းခိုးရင် ပါရာဇိကကံကျတာဆိုတော့ ပါရာဇိကကျတဲ့ ဦးဇင်းနဲ့ ဆွမ်းအတူမစားချင်ကြတဲ့ သဘောပေါ့လေ'
အားလုံးက ၀ိုင်းကြဉ်ထားတော့ ဦးဇင်းလေးလည်း တော်တော်လေး အထီးကျန်လာပုံရတယ်။ နောက်တော့ သူကျောင်းထိုင်ဆရာ တော်ကို သွားလျှောက်ပြလိုက်တယ်။ ဆရာတော်က ချက်ချင်းသံဃာကုန်ခေါ်ပြီး သြ၀ါဒပေးတယ်။ တပ်အပ်မမြင်ဘဲနဲ့ မစွပ်စွဲဖို့ ပေါ့လေ။ သံဃာကြားထဲမှာ ဦးဇင်းလေးက လူးလှိမ့်ငိုနေတယ်တဲ့။ သူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလည်း ကျိန်ပြီးပြောတယ်တဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီးရဲ့ ဒီကျောင်းကို ပြန်ရောက်လာတော့တာပဲ။
သူရောက်တဲ့အချိန်က တပည့်တော် ဆွမ်းစား နေတဲ့အချိန် ၁၁နာရီလောက် ရှိပြီ။ ဒါနဲ့ တပည့်တော်ကလည်း “ဦးဇင်း တစ်ခါ တည်း ၀င်ဘုဉ်းပေးလိုက်” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူကဘာပြန်ပြောသလဲဆိုတော့ “ဆရာတော်လည်း တပည့်တော်ကို ယုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တပည့်တော်ကို တစ်ပါးတည်း ပဲပြင်ပေးပါတဲ့”။ တပည့်တော်ကလည်း “ဟဲ့...ဦးဇင်း၊ ဘာတွေပြောနေတာ လဲ၊ လာ...တစ်ခါတည်း ဒီမှာ ၀င်ဘုဉ်းပေး” လို့ ထပ်ပြောပေမယ့် သူက အကြောက်အကန်ငြင်းနေတာနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ သူစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီး ပြင်ကျွေးခိုင်းလိုက်တယ်။ နောက်ရက်တွေမှာလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ တစ်ပါးတည်းပဲ စားတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း စကားမပြောဘူး။ ပြီးတော့ ကျောင်းထောင့် က မန်ကျည်းပင်အောက်မှာ အမြဲသွားသွား တရားထိုင် တယ်။ ဒီကိုရောက်ပြီး ၁၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲ ဦးဇင်းလေးရယ် ပြောရမှာတောင် စကား မထွက်ရက်ပါဘူး။ အဲဒီ သူတရား ထိုင်တဲ့ မန်ကျည်းပင်မှာပဲ ကြိုးဆွဲချ ပျံလွန်တော်မူသွားတယ်။’
‘အဲဒီဦးဇင်းလေးက သင်္ကန်းကို တကယ်ကော ယူမိလို့လားဘုရား’
‘အဲဒါပြောမလို့ပဲ….. ပျံလွန်တော်မူပြီး သုံးလလောက်ကြာတော့ သူနဲ့တော်တော်ခင်တဲ့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်း ဦးဇင်းတစ်ပါးရောက်လာ တယ်။ ရောက်လာတဲ့....သူ့ သူငယ်ချင်း ဦးဇင်းဆီက စကားကြားရတော့မှ အားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်။ သင်္ကန်း ပျောက်တဲ့ဦးဇင်းလေးက သင်္ကန်းပျောက်သွားတာတော့ တကယ်ပျောက်သွားတာပဲ။ ဖြစ်ပုံက အဲဒီဦးဇင်းလေးက ဆွမ်းခံကြွနေ တုန်း သူ့ရဲ့ ဦးလေးဘုန်းကြီးက တောကရောက်လာတယ်တဲ့။ မန္တလေးကို ပစ္စည်းလာဝယ်တာတဲ့၊ သေတ္တာပေါ်မှာ သရီးရိုင်ဖယ် သင်္ကန်းကို တွေ့သွားပြီး သဘောကျတာနဲ့ တူလည်းဖြစ်၊ တပည့်လည်းဖြစ်နေတာနဲ့ မပြောပဲ ယူသွားလိုက်တယ်။ ဘူတာကို ချက်ချင်းဆင်းရတာဆိုတော့ ယူသွားတဲ့အကြောင်း ဘယ်သူ့မှလည်း ပြောချိန်မရတော့ဘူး ထင်တယ်။ အဖြစ်မှန်ကို ဘယ်သူမှ မသိကြတော့ ပြဿနာဖြစ်ကြတော့တာပဲ။
တစ်ထွာလောက်ရှိတဲ့ လျှာတစ်ချောင်းဟာ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ အသက်တစ်ချောင်း အထိ ဆုံးရှုံးသွားရတယ်။
တပည့်တော် အသက် ရှစ်ဆယ်နီးနေပါပြီ။ တော်ရုံတန်ရုံကိစ္စကို အသက်အရွယ်အရ တရားနဲ့ ဖြေလို့ ရပါတယ်။ ဒီဦးဇင်းလေး ကိစ္စကျတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကိုယ်တိုင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ရတဲ့ တပည့်ရင်းလေး ဖြစ်နေတော့ သံယောဇဉ်လည်း တော်တော်ဖြစ်မိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ထဲမှာ ဣနြေ္ဒမရတော့ ဖြစ်မိတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿကာ သူ့ဝဋ်ရှိလို့ ခံရတာပဲလေ လို့ နှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ် ဦးဇင်းလေးရယ်’
ဆရာတော်က ဆက်တိုက်ပြောလိုက်ရလို့ ထင်သည်။ သည်မှာပင် စကားကို ရပ်ထားသည်။ စကားက သည်မှာတင် မဆုံးသင့် သေးပါ။ သည့်အတွက် သူကပဲ စကားစလိုက်ရသည်။
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “သတ္တ၀ါတွေဟာ ပျက်စီးဖို့ အချိန်တန်လာရင် နည်းဆိုးနည်းမှားဟာ နည်းမှန်ဟန်ဆောင်ပြီး စိတ်မှာ ထင်လာတတ်တယ်” တဲ့။ တကယ်တော့...လူဟာ ပျက်စီးဖို့ အချိန် တန်လာရင် ဘာနဲ့ မှ ကာကွယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ကဲ...ကဲ....ဦးဇင်းလေးလည်း တရား ဟောရဦးမယ်။ ကြွတော့...ကြွတော့”
သူ ဆရာတော်ကိုလက်အုပ်ချီပြီး အရိုအသေပေးရင်း နားနေဆောင်သို့ ပြန်ခဲ့သည်။ လှမ်းရသည့် ခြေလှမ်းတွေက သိပ်မသွက်ချင်၊ လေးတွဲ့ဖင့်နှေးနေသည်။ ဆရာတော်ကတော့ သူ့တပည့် ဦးဇင်းလေး လဲလျောင်းရာ အုတ်ဂူလေးနားမှာပဲ ရပ်ကျန်ခဲ့သည်။
မြတ်စွာဘုရားလည်း လျှာတစ်ချောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အရှင်သာရိပုတ္တရာလည်း လျှာတစ်ချောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆရာတော်အရှင်ဇနကာဘိဝံသလည်း လျှာတစ်ချောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်း လျှာတစ်ချောင်း ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်း လျှာတစ်ချောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ နပိုလီယန်လည်း လျှာတစ်ချောင်းကို အသုံး ပြုခဲ့သည်။ ဟစ်တလာလည်း လျှာတစ်ချောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ မာသာထရီဇာ လည်း လျှာတစ်ချောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘင်လာဒင်လည်း လျှာတစ်ချောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
ထိုလျှာတစ်ချောင်းသည် မကြာခင်ပြာဖြစ်ရဦးမည်။ ပြာမဖြစ်ခင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့် အကောင်းအဆိုး တွေဖန်တီးနေဦးမည်။ ထိုလျှာတစ်ချောင်းကြောင့်ပင် သူကျင်လည်ရာဝန်းကျင်တွင်ရှိသော သတ္တ၀ါတို့သည် အမြင့်သို့လည်း ရောက်သွားနိုင်သည်။ အနိမ့်သို့လည်း ရောက်သွားနိုင်သည်။ အမှောင်ထဲသို့လည်း ရောက်သွားနိုင်သည်။ အလင်းထဲသို့လည်း ရောက်သွားနိုင်သည်။ လျှာတစ်ချောင်းသည် အဖြူအမည်းကို ကောင်းကောင်းဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
လျှာတစ်ချောင်းသည် ပြာဖြစ်သွားလျှင်ကော ဇာတ်သိမ်းသွားပြီဟု ဆိုနိုင်ပါမည်လား။
တချို့ ဖတ်ဖူးပြီးသား ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက် ပြန်လည် မျှပေပေးခြင်းပါ။
ကျမ ဖော်ဝပ်မေးလ်က ရခဲ့တာလေး။ ဘယ်သူမှန်း မသိတဲ့ မူရင်းရေးသူ ဆရာတော်ကို ကြည်ညိုစွာ ခရက်ဒစ်ပေးရင်း ပို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း MMT ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။
ဇွန်မိုးစက် Sat Jul 03, 02:40:00 PM GMT+8
ဖတ်ဖူးတယ် အစ်မ။ ဇွန် အမှတ်မမှားရင် ရဝေနွယ် (အင်းမ) ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲ။ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတဲ့ အစ်မချစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Shinlay Sat Jul 03, 03:08:00 PM GMT+8
စာကောင်းလေးဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘ၀အတွက်မှတ်သားစရာ
ရေသန့်Sat Jul 03, 03:52:00 PM GMT+8
မောင်သီဟ Sat Jul 03, 04:00:00 PM GMT+8
ဟူးးး ခက်တယ် စွပ်စွဲချက်ဆိုတာ ဟူးးး
ကလူသစ် Sat Jul 03, 05:16:00 PM GMT+8
အဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တယ်ဗျ။ ကိုယ့်သီလ ကိုယ်ယုံရင် အေးဆေးပေါ့ဗျာ။ သူများ ဘာပြောပြောပေါ့။
ညီမလေး Sat Jul 03, 05:32:00 PM GMT+8
လူတွေဟာ စကားတခွန်းကို သိပ်အလွယ်ပြောတတ်ကြတယ်နော် ... ပြောသူဟာ အပြောခံရသူဘက်ကို ငဲ့ကြည့်ဖို့ ၊ စဉ်းစားပေးဖို့လဲ မေ့နေတတ်ကြသေးတယ် ။ ကိုယ်ချင်းစာပြီး ပြောနိူင်ကြရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေတာကျ နည်းမမှန်ဘူးလားလို့ ။ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံဖို့ ကပိုအရေးကြီးပါတယ်လားလို့ ။
ကိုဇော် Sat Jul 03, 09:48:00 PM GMT+8
လူတွေရဲ့ လျှာက တော်တော် ခက်သလို. . .
သူတို့ရဲ့ အတ္တ အတွေးတွေကလည်း တော်တော် ခက်တယ်။
sosegado Sat Jul 03, 10:03:00 PM GMT+8
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်ပျက်လေးပါပဲ၊ ဘုန်းကြီးလောက….. လောက မလွယ်ပါဘူး၊
နေ၀သန် Sat Jul 03, 10:37:00 PM GMT+8
အင်း.. ပုထုဇဉ်မှန်ရင် သံဃာတောင် ကိုယ့်စိတ်ကို မဖြေနိုင်ပါလား... အမှန်ဆို သံဃာတစ်ပါးအနေနဲ့ တရားအားထုတ်ရင်းဖြေသင့်တယ်... ဒီလောက် တရားရိပ်မှာရှိနေတာကို......
SHWE ZIN U Sat Jul 03, 11:44:00 PM GMT+8
စိတ်မကောင်း စရာ တွေပါဘဲ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မှ မဟုတ်တာ ရင်ဆိုင်နှိင်ရမှာပေါ့ ကံပါလာလို့ ထင်ပါတယ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sat Jul 03, 11:58:00 PM GMT+8
မထိန်းသိမ်းဘဲပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် လူတစ်ယောက် ဘ၀ပျက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါဘဲ..
ဒါကြောင့် ကိုယ်ထင်တာ၊ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တိုင်း မပြောသင့်တာကို အလေးအနက်ထားပြီး သင်ခန်းစာယူသွားပါတယ်အစ်မရေ...
Moe Cho Thinn Sun Jul 04, 03:39:00 AM GMT+8
စိတ်မကောင်းစရာပဲနော် မမ။ ဒါမျိုး အပူ ကြုံတွေ့ရရင် စိတ်ထားတတ်ဖို့သာ အရေးကြီးတယ် ထင်မိတယ်။ သေချာ တပ်အပ် မတွေ့ မမြင်ဘဲ သံသယနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံတာ တကယ်ပဲ မကောင်းဘူး။
မောင်မောင် Sun Jul 04, 03:56:00 AM GMT+8
ဖတ်လို့ ဗဟုသုတ ရလိုက်ပါတယ်။
လျှာ တစ်ချောင်း ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာ။
နောက်တစ်ခုက တော့ ဦဇင်း လေးလဲ ကလဲ ပျံတော်မူရမယ့်အချိန် ပျက်ရမယ့် အချိန်က တန်လာပြီ ဆိုတော့ လဲ ဘယ်သူမှ တားနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
မျှဝေပေးသော မချစ်ကြည့်အေး အားကျေးဇူးပါ။
ကိုပိန် Sun Jul 04, 10:28:00 AM GMT+8
ကိုယ်စိတ်ကို သိပ်စိတ်မချနဲ့၊ အနတ္တ။ ယုံကြည်မှုရှိကြ။
ချိုကျ Sun Jul 04, 05:45:00 PM GMT+8
ဟုတ်အစ်မ ဖတ်တော့ပြီးသွားပြီ ဒါပေမယ့် ထပ်ဖတ်ရတော့ကောင်းတာပေါ့ ကျေးဇူးတင်ပါ၏ :)
Anonymous Mon Jul 05, 07:33:00 AM GMT+8
အံ့သြစရာဘဲ သံလာတော်တွေ ဖြစ်သော်ငြားလဲ ဘာ့ကြောင့် တရားတော်အတိုင်း နှလုံးမသွင်းနိုင် တာလဲ။ သက်န်း ပျောက်တယ်ဆိုအုန်း လိုချင် သူကို အလျူအဖြစ်ပေးရတာဘဲလို့ နှလုံးသွင်း သင့်တာပေ့ါ။ ဘုရားသားတော် ဖြစ်နေရဲ့သားနဲ့ဘာ့ကြောင့် တခြားသံလာတော်တွေကပါ ၀ိုင်းကျဉ်တာပါလိမ့်
တရားမပြည့်ဝတဲ့ သံလာတော်တွေကြောင့် ဦဇင်းလေး အစိမ်းသေ သေရတာ စိတ်မကောင်း စရာပါ နောက်တချက်ကလည်း ဒီအရပ်က သံလာအသိုင်းဝိုင်းက ကျဉ်ရင် နောက်အရပ် ပြောင်း ပေ့ါ။ ကိုယ့်အသက် သတ်သေစရာ မလိုဘူး။
စုချစ် Mon Jul 05, 05:03:00 PM GMT+8
ဆရာတော် ရဝေနွယ်-အင်းမ ရေးတဲ့ အမြဲစီးဆင်းနေသော မြစ်တစ်ဆင်း အကြောင်း စာအုပ်က တဲ့....။ ပြန်လည်မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ...
Anonymous Sun Aug 08, 10:46:00 AM GMT+8
ကိုယ့်သင်္ကန်းပျောက်တာ သူများကို မဆင်မခြင် သွားစွပ်စွဲရက်တဲ့ ရဟန်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ နောက် မဆင်မခြင် ဝိုင်းပယ်ကြတဲ့ ကျန်တဲ့ ရဟန်းတွေလဲ အပြစ်ရှိတယ်။
ယူသွားတဲ့ ဘုန်းကြီးကလဲ စာလေးတစ်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ် ရေးထားခဲ့သင့်ပါတယ်။ ဒီလို မပြောမဆို လုပ်သွားတော့ မဆိုင်တဲ့သူ ဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့။